BIMP, yakanakisa batch uye muchinjika-chikuva mufananidzo mupepeti | Linux Vakapindwa muropa
BIMP, yakanakisa batch uye yakawanda yemufananidzo mupepeti ... kana iwe uchitova mushandisi weGIMP
Munguva pfupi yapfuura, shamwari yangu yakandibvunza maitiro ekugadzira zvitambi zveTeregiramu. Ini ndaive nemifananidzo yakawanda uye ndaisatomboziva kuti ndotangira papi Paive nenhanho yaimudzipa, yaive yekukudziridza iyo mifananidzo kuitira kuti chikamu chakarebesa chiine 512px, chimwe chinhu icho, ndichifunga kuti ini ndaida kuita zvese nharembozha, ndakaigadzirisa neimwe bot kubva kune imwechete Teregiramu. Kudzoreredza mifananidzo mumatch chimwe chinhu chinogona kuuya chinobatsira pane dzakawanda nguva, senge sevha kana iine zvakabatwa zvakati wandei uye ichida kuti ive ese 1200px yakafara. Kune iwo mabasa, imwe yesarudzo dzakanakisa inodaidzwa BIMP.
BIMP ndicho chidimbu cheBatch Image Manipulation Plugin, iyo yakashandurwa muchiSpanish ingave iri "batch image manipulation plugin", uye ndinofungidzira kuti izwi rekuti "plugin" rakawedzerwa nekuti, nenzira iyi, zita rinotaridzika kunge software yakaiswa uye kubva patinotangisa BIMP. Nekuti iplagi, uye izvi zvinoreva kuti zvinoenderana kana kushanda mukati meimwe software. BIMP iri GIMP plugin uye, kana yaiswa, tinogona kugadzirisa mifananidzo yakawanda sekutsanangurwa pazasi.
1 BIMP yakafanana neapp iyo yakaiswa muGIMP
2 Maitiro ekuisa iyo paLinux
BIMP yakafanana neapp iyo yakaiswa muGIMP
Kamwe yaiswa, uye zvinoenderana nesisitimu yekushandisa kana mhando yekumisikidza inoitwa neimwe nzira, sarudzo nyowani inowanikwa mune GIMP "Faira" menyu ine zita "Batch Image Manipulation ...". Kana isu tichivhura, izvo zvatinoona ndizvo zvatiinazvo mumusoro wekutora: Chaizvoizvo, iapp ine GUI iyo yatinogona kugadzira inotevera batch edits:
Flip uye kumonyanisa.
Sharp kana blurry.
Chinja kumanikidza fomati.
Imwe nzira yeGIMP, panowanikwa runyorwa rwezvishandiso zveGIMP, zvinova zvakati omei, kutanga nekuti inoshandisa iro zita rekutanga, kureva zita remutemo Chinhu chakanaka ndechekuti kune bhokisi rekutsvaga.
Zvirinani zvemuno BIMP mabasa Ivo vari nyore kushandisa. Chatinofanira kuita kudzvanya pa "Wedzera" uye sarudza zvatinoda kuita. Chinhu chinonyanya kufadza ndechekuti iwe unogona kusanganisa edhisheni, senge kushandura saizi mifananidzo kuti ive 1200px yakafara, kuchinja fomati kuJPG uye nekuwedzera watermark, iyo ingave yakanakira blog rakadai, chero bedzi isu tichiwedzera logo yeiyo .
Chatinofanira kugara tichifunga ndechekuti isu tinofanirwa kudaro tarisa pamatanho ekutanga. Semuenzaniso, kana tichizonatsurudza mifananidzo, iyo "Tambanudza" sarudzo inogoneswa nekutadza, patinogona kufarira kuchengetedza chimiro (Chengetedza). Mune inotevera skrini isu tinotaridzika sei iyo interface yaizotaridzika kana taizoshandura saizi, fomati, tenderera uye kuvarima:
Kana editions dzave kuwedzerwa, tinobaya pa "Wedzera mifananidzo" kuti tiwedzere uyezve pa "Nyorera" kuti uite shanduko.
Maitiro ekuisa iyo paLinux
Sezvatatsanangura, BIMP ipulagi-in yeGIMP, uye GIMP isoftware muchinjiko. Kana isu tikashandisa Windows kana macOS, izvo zvingangove zvisinganyanye kufarira kune vedu vaverengi, isu tine yekumisikidza pane iyo peji reprojekti repamutemo. Kubva mairi tinogona zvakare kurodha pasi sosi kodhi, asi ruzivo rwakadzama rwuri mukati mayo GitHub peji. Zvinotsanangurwa nemusunguri wayo kuiisa paUbuntu / Debian neFedora, saka vashandisi veamwe masisitimu anoshanda vanofanira kutsvaga kwehupenyu.
Iwe unogona kuyedza kurodha pasi kodhi uye wedzera iyo isina kuvharwa kune iyo GIMP plugins folda, asi mashandiro ayo haana kuvimbiswa. Vashandisi veArch Linux uye zvigadzirwa zvinowanika muAUR, asi kuti ishande, gimp-git inofanira kuiswa. Imwe mhinduro, inovawo iyo yandinoshandisa uye yandinokurudzira kune vamwe, ndeyekuti isu tinoshandisa iyo Flatpak vhezheni yeGIMP. Kutanga, nekuti inogadziridza ipapo; chechipiri, nekuti kuisa BIMP kunogona kunge kuri nyore sekutsvagisa musoftware centre, kana ichienderana neFlathub plugins, nekudzvanya "Isa", kana kuvhura terminal nekutaipa uyu murairo kana akati plugins asingaoneke:
Isu tanga tatsanangura zvataurwa pamusoro apa imwe nyaya mairi isu takakuratidza maitiro ekuisa Flathub plugins, uye ini ndinofunga zvakakosha kune mashandiro ayo.
Zviri pachena kuti kune dzimwe nzira dzakafanana kana zvirinani kupfuura BIMP, muchidimbu nekuti mamwe anogona kuiswa seanomiririra maneja wefaira. Asi chinhu chikuru nezveBIMP ndechekuti ndizvo inoshanda kune chero inoshanda system mune iyo GIMP inowanikwa, uye kana uchinge wakazviita, iwe unogona kugara uchi batch edza mifananidzo zvisinei kuti uripi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » BIMP, yakanakisa batch uye yakawanda yemufananidzo mupepeti ... kana iwe uchitova mushandisi weGIMP
JingOS inoburitsa yayo yekutanga ISO ... asi uchafanirwa kumirira kana iwe uchida kuyedza
MaSpanish maYubhu anorwisa Treasure. Maonero aBenjamin Franklin